"Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny Zanany lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra?"Romana 8:31,32
SIza moa no resahin’ny apostoly Paoly raha niteny izy hoe momba antsika Andriamanitra? Iza izany “isika” izany? Hahafantatra isika, raha mamaky ireo toko eo aloha, fa ny tiany holazaina dia ireo izay “nohamarinina tamin’ny finoana”, ka manana “fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika”, mitoetra ao amin’ny “fahasoavana”, ary afaka “hifaly amin’ny fanantenana ny voninahitr’Andriamanitra” (Romana 5:1,2). Ry kristiana, tena mahagaga ny toerana misy antsika: Ilay Andriamanitsika, Ilay Andriamanitra Tsitoha, dia momba antsika tsy misy fepetra ary ho mandrakizay. Mino izany ve isika? Miaina izany ve isika?
Matetika loatra isika no mitovy amin’i Jakoba, izay niteny hoe: “Izaho ihany no zoin’izany rehetra izany” (Genesisy 42:36). Nefa aza izy efa nadiva hihaona tamin’i Josefa, zanany malalany, tsy hitany hatry ny ela. Aoka tsy hohadinoina fa ny antsipiriany kely indrindra amin’ny tranga eo amin’ny fiainantsika dia efa fantatra sy nomanin’Ilay Andriamanitra momba antsika sy mampiara-miasa ny zavatra rehetra hahasoa antsika (Romana 8:28).
Lafo loatra ny nividianany antsika, ka tsy maintsy tsinjoviny isika, Izy “Izay tsy niaro ny Zanany lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra”. Dia ho sahintsika ve ny hisalasala tsy hino hoe tia antsika Izy ary mikendry ny hahasoa antsika? Ao aminy dia “tsy misy fiovaovana na aloka avy amin’ny fihodinana” (Jakoba 1:17). Mitsinjo antsika ny masony (Salamo 32:8), mitrotro antsika Izy (Isaia 46:4). Tsy hisy “hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika” (Romana 8:39).